Teny amin’ny tontolo ambanivohitra, teny anivon’ireo tantsaha mpiompy no nisafidianana ireo voalohany nahazo ny tohana ho amin’ny fandraharahana avy amin’ilay teik’asa FIHARIANA . Isan’ireo nanana tetik’asa matotra I Gerard, mpiompy avy ao Andranomanelatra, mpamokatra ronono izy hatrizay ary maniry ny hamokatra avo efatra heny. Izy no voalohany nahazo famatsiambola tamin’ny Fihariana. Ary niarahaba azy manokana ny filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA, tonga nanolotra sy nanampy ireo tantsaha teny an-toerana.
Isan’ny fomba idirana amin’ny Fihariana ny kaoperativa ho an’ireo tambanivohitra.
Teto Andranomanelatra, nahazo izany ny kaoperativa Sandratra, iombonan’ireo mpamokatra rononp, ka nomena omby vavy. Ny fidinana sy fijerena ifotony ny tantsaha toa izao no ahafantarana ireo olana sy ahitana ny vahaolana ho an’ny tontolo ambanivohitra. Tsy hijanona ho fanomezana famatsiam-bola amboalohany fotsiny anefa ny FIhariana hoy ny filoham-pirenena fa efa mipetraka ny fanaraha-maso toa ireo mpitsabo biby izay hanampy maimaim-poana ireo mpiompy ireo. Nojerena ihany koa ny lalam-barotra hoan’ireo mpamokatra ronono eto Vakinakaratra ka nifanaraka tamin’ny orinasa socolait ny handraisan’izy ireo ny vokatra ronono amin’ny vidiny tsara. Fanamby tsy maintsy tratra ny fanatsarana ny toe-karena ambanivohitra ka nandrisika ireo tantsaha ny filoha.
Toa izany koa ireo mpamboly. Efa nambaran’ny filoham-pirenena nandritra ny hetsika FIER MADA farany teo fa mila misokatra amin’ny lalam-barotra lehibe kokoa ny tantsaha, ary mila matihanina. Maro ireo torohevitra natolony ireo tantsaha mpiompy kisoa anatin’ny kaoperativa Avotra izay nahazo kisoa fito tamin’ny FIHARIANA teto Manandona, sy nahazo ihany koa famatsiam-bola handrakofana voly ny tany 30ha ananan’izy ireo.
Isan’ny nahazo fanohanana ihany koa ny lalam-pihariana landy izay ilofosan’ny kaoperativa. Famatsiam-bola amin’ny tahajana-bola ambany hatramin’ny 5% no azon’ireo nanana tetik’asa voafidy ireo. Natao hampivoarana ny fandraharahana, hahamatihanina, hamorona asa ary hampivoarana ny toe-karena sy ny fiaraha-monina. Manome lanja manokana ny famokarana ambanivohittra izay fototry ny fahavitan-tena ara-tsakafo ny nisafidianana ireo tantsaha hisitraka izany voalohany.
Tsy anavahana na izarana tavan’olona ihany koa ny fihariana ary manamafy izany ny nahatongavan’ny filohan’ny repoblika Andry RAJOELINA nanatona ireo tantsaha teny ambanivohitra omaly. Vao santatra izao famatsiam-bola sy fanampiana ireo tantsaha izao, mbola ho be ireo ho avy.